Ducadii Garsooraha Caddaaladda. ? Kaatooligga asalka ah iyo kan Aadanaha
8 Akhriska Min
Ducada Garsoorka Xaqa ah Waa midka loogula hadlayo Rabbi Ciise Masiix garsooraha kaliya ee Ilaaha Aabbaha ah hortiisa.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in salaadda ay tahay in lagu sameeyo rumaynta.
Ereyga Rabbiga wuxuu ina barayaa in haddii aan isaga raadinno waa inaan rumeysanno inuu dhegeysan doono inuu na dhegeysto oo tanina waa qarsoodiga waxan oo dhan, inaan rumeeysanno.
Iimaan la'aan salaadda waa erayo faaruq ah oo aan wax farshaxan ah gaadhin oo aan fulin ujeedadii loo sameeyay.
Waxaas oo dhan waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sababaha ugu waaweyn ee inoo horseeda in aan tukano, dad badan ayaa garsoorka cadaaladda ah weydiiya oo keliya si joogto ah laakiin aan ka soo jeedin qalbiga ka dibna salaadda ayaa lumisa waxtarkeeda.
1 Waa maxay salaadda xaakinka caddaaladda ahi?
1.1 Ducada garsooraha asalka ah ee Katooliga
1.2 U ducee xaakinka caddaaladda ee ragga
1.3 U soo ducee uun inuu xukumo maxbuus
1.4 Salaadda xaakinka garsoorka kiisaska adag
2 Goormaan tukadaa salaadda?
Waa maxay salaadda xaakinka caddaaladda ahi?
Mr. Jesucristo Isagu waa saaxiibkeen, walaalkeen iyo Xaakinkeenna Caddaaladda leh.
Waxaa la weydiiyaa waxyaabo badan oo mid ka mid ah codsiyada ugu caansan waa badbaadin annaga iyo qoysaskeenna.
Masiixiyiin badan ayaa salaada tukada maalin kasta waana tan inay noqotaa maadaama maalin kasta sharku soo food leeyahay oo markasta way wanaagsan tahay in guriga laga tago iyadoo la ilaalinayo Xaakinka Caddaaladda leh ku saabsan mid kasta oo naga mid ah.
Tani waa duco laga sameeyay qalbiga tan iyo markii aan gacantaada gelinay waxa ugu dhow ee aan haysanno oo had iyo jeer ah carruurteenna iyo qoyskeenna guud ahaan.
Salaaddan samee ka hor intaadan bilaabin safarka maalinlaha ah, adiga iyo qoyskaaga oo dhan quraacda Waa fikrad aad u wanaagsan Maaddaama aan sidoo kale dhiirigelinayno ficilnimada midnimada qoyska oo aan fulinno waxa ereyga Die soque leeyahay haddii labo ama saddex ay oggolaadaan oo Aabbaha weydiistaan ​​Ciise wuxuu siin lahaa baryada jannada.
Ducada garsooraha asalka ah ee Katooliga
Oh xukun rabaani ah oo xaakin ah inaad gacanta u fidiso kuwa saboolka ah iyo kuwa hodanka ah!
Jacaylka daa'imka ah ee cafiska iyo sadaqada, iftiinka ruuxiga ah ee iftiimiya waddooyinka mugdiga ah, Ereyga nolosha iyo jacaylka qoto dheer, Barida iyo marag noo siiya salaadda.
Adiga oo ah silica aad u xun ee dulmiga iyo sharafdarradaba, in Quduusnimada iyo daahir ahaantaad aqbasho si is-hoosaysi ah ciqaabyada ugu xun, Adiga oo ah boqorka boqorrada, oo ku nool oo u xukuma xumaanta oo dhan iyo bini-aadmiga oo dhan, oo aad u soo dhawaysay adigoo aan gunuunacin ama caytamin. nabarro xanuun badan, Oo waxaad wax kasta badbaadintaada u bixisay,
Jinniyo iyo kuwa idin dhex jooga ayaa ku cararay xooggaaga salaadda, Oo kuwa buka ayaa sariirtooda ka soo jiiday, Indhala'aanna waad ka bogsiisay, Indhala'aan baad ku baratay kuwii baraska qabay, nolosha iyo kibis baad siisay kuwii kula socday.
Kalluunka iyo kibista waad ku badiseen inaad dadka siiso, biyahaad furatay oo waad ku dhex socodsiisay, Maalin iyo habeenba waxaad siisay nabad iyo wada noolaansho, Xaakinkaaga xaqa ah oo aan xasilloon la soco dadkaaga, Oo adigoon wax xadid ah samaynayn, Oo waxaad fulisaa ballanqaadkaaga, Markuu cibaadada kuu yimaado, Ma ceebeyn doontid ama khiyaanayn, Cidna kama xumaan doontid ama wax dhaawac doontid, Waxaad nagu bari doontaa masaallo, Waxaad dhaxal weligeed ah uga sii gudubtay Kitaabka Quduuska ah, waad dhageysataa tukashadeena oo waxaad u tagtaa raallinimadayada.
Tukashadu marwalba waa hab lagu soo qaado, marka lagu daro codsiyadeenna, ammaanteenna iyo mahadnaqna in Eebbe na siiyo iyo xubnaha qoyskeenna ilaalinta maalin kasta oo adduunka ah.
Marka aan sameyno salaaddaas waxaan ognahay oo aan aaminsanahay ilaalinta ilaahnimadu inay inaga horreyso wax kasta oo aan sameeyno maalintaas.
Kaniisadda Katooliga waxay tusaale u tahay ducada garsooraha caddaaladda ah ee asalka ah, tusaalahan salaadda waxaan u aragnaa inaan ku bilawno aqoonsi dhammaan astaamaha Ciise Masiix ka dibna aan sameyno codsiga oo aan ku gabagabeyno mahadnaqida la siiyay, kan dambe oo ah ficil iimaan aaminaad leh Mucjiso ayaa horeyba loo qabtay.
U ducee xaakinka caddaaladda ee ragga
Aaranka libaaxa igu jira, Iyo libaaxyada i dabayareeya, Xumaan ayaa igu haya, Aniga waxaan dareemayaa cabsi iyo cidhiidhi. Hadda ma socon karo, waxaan ka baqayaa caddaaladdarro,
Cadaawayaashaydu way qosleen, Waxay aaminsan yihiin inay xoog leeyihiin, In kastoo cabsidaada ay muuqato, Waxaa jira Ilaaha ugu sarreeya oo i caawiya.
Xaakin xaakin ah, kaalay, dhaqso iigu timaada, sharraga xumaanta oo dhan, Nimanka kale way i weeraraan oo way i silciyaan, Xaakin xaakin ah, oo dhaqso ii kaalay.
Waan qayliyaa waxaanan raadinayaa jiritaanka noloshayda, Anigu waxaan ahay nin jilicsan, waan kuu baadi goobayaa oo ku heli kari maayo, kaalay, kaalay Garsooraha aan jeclahay.
Sicirrada iyo xumaanta, sixirkaas iyo santeria, Shayddaanka iyo dambiilaha, madaxaaga foororsada, dhinac uga tag, dhaqso uga bax, Xaakin Caawimaad ii kac, Waan ku baryayaaye, fadlan.
Isbedel iyo xasillooni ayaa soo socota, Ragga ayaa durba sacabinaya oo xushmeeya magacaaga Quduuska ah, Waad ku mahadsan tahay, waxaan ku siinayaa Xaakinkayga Xaqa ah, Weligaa mahadsanid, Halleeluuya, Aamiin.
Salaaddan qaaska ah ayaa jirta sababta oo ah heerka rabshadaha ee la soo maray waqtiyadii ugu dambeeyay, aad ayey u adag tahay in dariiqa loo aado maalin kasta oo aadan dareemin jawiga ka buuxa tamar darrada xun.
Tani waa sababta salaaddani ay muhiim u tahay maadaama aan weydiisaney Xaakinka Xaqa ah inuu keeno qalbiga iyo xasilloonida qalbiga dadka si rabshaduhu sidan u joogsadaan.
Kaliya qalbiga wanaagsan ee Ciise Masiix ayaa qalbiga u rogi kara mid wanaagsan iyo rajooyin wanaagsan oo barakeysan.
Waxay ka fiican tahay in la joojiyo xadgudubka iyo rabshadaha marka loo eego tukashada iimaanka ka buuxa ujeedooyinka wanaagsan, ee aan lahayn danaysi iyo nafta.
U soo ducee uun inuu xukumo maxbuus
Gacaliye Rabbi Ciise. Waxaad ku dhashay bilaash.
Ruuxaaga awooda badan waa xor, xitaa haddii jirkaaga jirka ahi uusan muuqan.
Isaga, kan ah jiritaankaaga rabbaaniga ah, ayaa adiga ku dhex jira, had iyo goorna wuu kula socdaa.Waxaan kuugu baaqayaa jiritaanka ruuxiga ah ee kugu jira oo waxaan kaa codsanayaa inaad sii dayso, xorriyaddaas oo la mid ah nolosha kasta oo damiir leh.
Waxaan ahay albaabka furan oo qof aadanuhu ii soo dhowaan karayn, albaabkaasina kuu horseedi kara nabad, jacaylka Eebbe iyo deriskaaga, wanaagga iyo farxaddaada, ayaa si furan oo furfuran u furan, hadda iyo Weligaa.
Xukunkani wuxuu kaliya xukumi karaa inuu siidaayo maxbuus waa mid aad u xoog badan.
La noolaanshaha daqiiqaddan xun ee xubin qoyska ka mid ah ama saaxiibkaagu shaki la'aan waa mid ka mid ah khibradaha ugu xumaa ee aad soo mari karto.
Kuwa laga xayuubiyay xorriyaddu waa geedi socod xanuun badan oo marar badan salaadda ay tahay tan keliya ee siin karta xoogaa nabad ah iyo rajo.
Garsooraha Caadilka ah ee Ciise Masiix ayaa la weydiiyaa si markaa go'aamada la gaadhay ee ku saabsan xukunku dib loogu noqdo, in fahamku furmo iyo inay wax ka qaban karaan dhinaca cadaalada.
Si la mid ah, codsigana waa la dheereyn karaa si loo codsado wax yar oo nabad ah iyo dulqaad, iyadoo la isku dayayo in la sameeyo waxa ereyga Ilaah yiraahdo, u duceyso deriskeenna.
Salaadda xaakinka garsoorka kiisaska adag
Garsooraha ilaahiga iyo cadaaladda ee kuwa nool iyo kuwa dhintay, qorraxda weligeed ah ee caddaaladda, waxay ku xardhan tahay caloosha nadiifka ah ee Maryantii bikradda ahayd xagga nolosha aadamiga.
Xaakin Xaakin ah, Abuuraha cirka iyo dhulka oo ku dhintay iskutallaabta jacaylkayga.
Adiga, oo lagugu duuduubay oo lagugu riday xabaal aad ka soo kicisay maalintii saddexaad, waxaad ku guuleysatay geerida iyo cadaabta. Caadil iyo Qabiil Xaakim ah, maqal baryadayda, dhegayso codsiyadayda, dhegayso codsiyadayda oo sii diritaan wanaagsan.
Codkaaga cilaaqaadka leh wuxuu dejiyay duufaanka, wuxuu bogsiiyey kuwa buka oo wuxuu soo nooleeyay kuwii dhintay sida Laasaros iyo carmalkii Na'im.
Boqortooyada codkaaga ayaa ka carartay jinniyada, iyagoo ka dhigaya inay ka baxaan meydadka kuwa caqliga leh, oo kuwa indhaha la 'indho la', oo carrab la la hadla, maqla kuwa dhegaha la 'oo cafiya dembiilayaasha, sida Magadaliya iyo curyaanka. barkadda.
Waxaad noqotay cadaawayaashaadii kuwo aan la arki karin, Oo kuwii kuu xidhnaa inay kugu silciyaan markay codkaaga wax ku dhacaan, oo markaad iskutallaabta ku dhammaato, ayaa hadalkii xooggiisu yaraa. Waxaad xabsiga ka furtay Butros oo aad ka soo bixisay adigoo aan la arkin ilaaliyaha Herodos.
Waad keydday Dimas waadna cafisay dhilladii.
Waxaan kaa baryayaa, xaakin xaakin ah, inaad iga furto cadaawayaashayda oo dhan, oo aan la arki karin, oo aan la arki karin. Quduuska aad isku duudduubtay ayaa igu daboolay, hooskaaga quduuska ah ayaa i daboolay, oo indhashareertaada indhahaaga daboolayna waxay indhala'aanaysaa kuwa i silciya iyo kuwa i jecel. Shar, indho leh oo aan arkeynin lugahaygu leeyihiin oo aan isoo gaadhin, gacmahana leeyihiin oo ha i jirrabin, dhegaha ayaa leh mana i maqlaan, carrabku way leeyihiin oo ha i dacweynina bushimahaaguna way ka aamusi doonaan maxkamada markay isku dayaan inay i dhaawacaan.
Oh, Ciise Masiix Caddaaladda iyo Xaakinka Ilaah!, Iga raalli ahaw nooc kasta oo silica iyo dhibaatooyinka ah, deymaha iyo ballanqaadyada, oo ii yeer oo aan kugu yeero boqortooyada codkaaga xoogga badan iyo kan quduuska ah ee kuu yeeraya gargaarkaaga, xabsiyada fur, silsiladaha Xidhiidhkiina wuu jabay, jabihii iyo baararka waa kala jajaban yihiin, mindiyo way jajabaan oo hub kasta oo iga gees ah waa la afuufayaa oo micnela'aan baa loo baahan yahay. Fardo fuushay, basaasikuna iima arkaan aniga, mana ay i helaan.
Dhiigaagu waa i maydhaa, Oo gogoshaada ayaa i daboolaya, gacantaada ayaa ii ducaysa, xooggaaga ayaa i qariya, iskutallaabtaada ayaa i difaacaya, oo waxaad ii noqotaa gaashaankayga nolosha iyo dhimashadayda.
Oh, Xaakin Xaakin ah, Wiilka Aabbaha daa'imka ah, in isaga iyo Ruuxa Quduuska ah aad tihiin hal Ilaah oo run ah!
Oh Erayga ilaah baa sameeyay nin!
Waxaan kaa baryayaa inaad igu daboosho khamiiska Quduusnimada Quduuska ah si aad uga baxsato khataraha oo dhan oo aad u weyneysid magacaaga Quduuska ah.
U soo ducee tukashada rabbaaniga ah iyo xukunka kaliya ee kiisaska adag ee iimaanka weyn leh!
Ciise Masiix, markii uu dhulka ku jiray, wuxuu marqaati toos ah u ahaa waxa maanka bani aadamka ku mashiin karo, wuxuu ku dareemay jidhkiisa markii uu go’aansaday inuu naftiisa u bixiyo jacaylka innaga.
Tani waa sababta qof aan isaga ka fiicnayn uusan u fahmin howlaha adag, ogaanayo sida aan dareemeyno, waxa aan u maleyneyno oo nagu hagaya inaan sameyno waxa saxda ah in la sameeyo, xitaa haddii aysan sidaa u caddeyn xilligan.
Ma jiro codsi adag oo aan lagu xallin karin duco leh iimaan badan, Ilaah had iyo goor wuu ilaaliyaa ballamadiisa.
Goormaan tukadaa salaadda?
Waad tukan kartaa ducada xaakinka markasta oo aad rabto.
Ma haysto waqti, daqiiqad, maalin toddobaad ama jadwal. Waa inaad tukan kartaa markaad u baahatid iyo goortaad doontid iyo caqiidadaada.